VAR ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် မှတ်ချက်ပေးရင်း ဘာကို မကျေမနပ် ဖြစ်မိခဲ့သလဲ ဆိုတာ ပြောကြားလိုက်တဲ့ #ဆိုးလ်ရှား - SPORTS MYANMAR
VAR ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် မှတ်ချက်ပေးရင်း ဘာကို မကျေမနပ် ဖြစ်မိခဲ့သလဲ ဆိုတာ ပြောကြားလိုက်တဲ့ #ဆိုးလ်ရှား
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ဟာ ဒီနေ့ နံနက် ပရီးမီးယား လိဂ် ပွဲစဉ်7အဖြစ် အာဆင်နယ် အသင်း ကို အိုးလ် ထရပ်ဖို့ဒ် မှာ ဧည်ခံ ကစား ခဲ့ ရပြီး တစ်ဖက် တစ်ဂိုးစီ သာ သရေ ရလဒ် ထွက်ပေါ် ခဲ့တာ ကြောင့် ပြိုင်ဖက် အသင်း နဲ့ တစ်မှတ်စီ ခွဲယူ ခဲ့ရ ပါတယ် ။
အဆိုပါ ပွဲစဉ် ရဲ့ ပွဲချိန် 45 မိနစ် မှာတော့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ရဲ့ ကွင်းလယ် ကစားသမား ဖြစ်သူ စကော့ မက် တော်မီနေး က အသင်း အတွက် ဦးဆောင် ဂိုး သွင်းယူ ပေးသွား နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။ အဆိုပါ သွင်းဂိုး က သူ့ရဲ့ ကစားသမား ဘဝ အိုးလ် ထရပ်ဖို့ဒ် မှာ သွင်းယူ ခဲ့တဲ့ ပထမဆုံး ဂိုး ဖြစ်ခဲ့ ရ ပါတယ် ။
အဲ့ဒီနောက် ပွဲချိန် ဒုတိယပိုင်း စတင် သွားတဲ့ အခါ 10 မိနစ် လောက် အကြာ မှာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ဟာ ပြိုင်ဖက် အသင်း ဂိုး ဧရိယာ ထဲ ဘောလုံး ပေးပို့ လိုက်တဲ့ အချိန် အာဆင်နယ် နောက်ခံလူ ကိုလာဆီနက် ဟာ လက်ထိ သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဒါကို ယူနိုက်တက် ကစားသမား တွေက ကွင်းလယ်ဒိုင် ဆီ စောဒက တက်ခဲ့ ကြ ပေမယ့် ကယ်ဗင် ဖရန့် က VAR စစ်ဆေး မှု မပြုလုပ် ခဲ့ပဲ ပွဲကို ဆက်လက် ကစား သွား စေခဲ့ ပါတယ် ။ အဲ့ဒီနောက် မကြာမီ မှာပဲ အာဆင်နယ် အသင်း အတွက် တိုက်စစ်မှူး အူဘာမီယန်း က ခြေပဂိုး သွင်းယူ သွားနိုင် ခဲ့ ပါတယ် ။
အဆိုပါ ဂိုး ကိုတော့ စည်းကြပ် ဒိုင်က လူကျွံဘော အဖြစ် သတ်မှတ် ခဲ့ ပေမယ့် ကွင်းလယ်ဒိုင် ကယ်ဗင် ဖရန့် က VAR နဲ့ စစ်ဆေး သွားခဲ့ ပြီး ဂိုး အဖြစ် ခွင့်ပြု သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။ အခုတော့ ယူနိုက်တက် နည်းပြ ဆိုးလ်ရှား က ပင်နယ်တီ ရရှိ သင့်လား ဆိုတဲ့ အပေါ် VAR ကို မေးခွန်း ထုတ်သွား ခဲ့လိုက် ပါတယ် ။
” ဒါဟာ ( အူဘာမီယန်း ရဲ့ သွင်းဂိုး ) VAR ဖက်က နေ ချမှတ် ခဲ့တဲ့ မှန်ကန်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် တစ်ခု ပါပဲ ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် တို့ ကရော ပင်နယ်တီ တစ်ကြိမ် မရ ရှိခဲ့ သင့်ဘူးလား ? ” လို့ ဆိုးလ်ရှား က သူ့ရဲ့ မကျေနပ် ချက်ကို ထုတ်ဖော် ပြောကြား လိုက်ပြီး ဦးဆောင် ဂိုး ရရှိ ပြီးနောက် ဂိုးပြန် ပေးခဲ့ ရတဲ့ အပေါ် …
” ကျွန်တော် တို့ ပွဲစဉ် အတွင်း 1 –0ဆိုတဲ့ ရလဒ် နဲ့ ဦးဆောင် ခဲ့ပြီး ဒုတိယ ဂိုးကို ဆက်လက် မသွင်းယူ နိုင်ခဲ့ ကြတာ ဟာ ပွဲ ဘယ်လောက် တောင် ရှိနေ ပြီလဲ ? ဒါဟာ ကျွန်တော် တို့ သေချာပေါက် လေ့လာ ကြရ တော့မယ့် အရာ တစ်ခု ပါပဲ ။ ကျွန်တော် တို့ အလုပ်တွေ ဆက်ပြီး ကြိုးစား သွားကြ မှာပါ ။ အတွေ့ အကြုံတွေ များပြား လာခြင်း နဲ့ အတူ ကျွန်တော် တို့ မှန်ကန် တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် တွေကို ချမှတ် နိုင်မှာ ပါ ”
” ဒုတိယ ပိုင်း ပြန်လည် စတင် ခဲ့တဲ့ အချိန် မှာ ကျွန်တော် တို့ တွေဟာ ပြိုင်ဖက် ကို ဒုက္ခ ပေးနိုင် လောက်တဲ့ အထိ မြန်ဆန် သွက်လက် မှု မရှိခဲ့ ကြဘူး လို့ ထင်မိ ပါတယ် ။ ပွဲစဉ် အနေအထား အရ အာဆင်နယ် ကတောင် ကျွန်တော် ဂိုး မရခင် အထိ ကျွန်တော် တို့ထက် ပိုပြီး တက်ကြွ နေခဲ့ သလို ပါပဲ ”
” ကျွန်တော် တို့ တိုက်စစ် ကစားပုံ ပိုပြီး ပုံဖော် နိုင်မယ် ဆိုရင် ဂိုး ရနိုင် လိမ့်မယ် လို့ ကျွန်တော် ထင်ခဲ့ ပါတယ် ။ ကျွန်တော်လည်း ကစားသမား ဘဝ တုန်းက ငါတို့ ဒီထက် ပိုပြီး လုပ်နိုင် ခဲ့ သင့်တယ် ဆိုတဲ့ အတွေး တွေးခဲ့ ဖူး ပါတယ် ။ ကျွန်တော် တို့ အခု တော့ လေ့လာ သင်ယူ မှုတွေ ဆက်လက် လုပ်ဆောင် ရပါ တော့မယ် ” လို့ ဆိုးလ်ရှား က အဆုံးသတ် ပြောကြား သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။
VAR ရဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြအပျေါ မှတျခကျြပေးရငျး ဘာကို မကမြေနပျ ဖွဈမိခဲ့သလဲ ဆိုတာ ပွောကွားလိုကျတဲ့ #ဆိုးလျရှား
မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ အသငျး ဟာ ဒီနေ့ နံနကျ ပရီးမီးယား လိဂျ ပှဲစဉျ7အဖွဈ အာဆငျနယျ အသငျး ကို အိုးလျ ထရပျဖို့ဒျ မှာ ဧညျခံ ကစား ခဲ့ ရပွီး တဈဖကျ တဈဂိုးစီ သာ သရေ ရလဒျ ထှကျပျေါ ခဲ့တာ ကွောငျ့ ပွိုငျဖကျ အသငျး နဲ့ တဈမှတျစီ ခှဲယူ ခဲ့ရ ပါတယျ ။
အဆိုပါ ပှဲစဉျ ရဲ့ ပှဲခြိနျ 45 မိနဈ မှာတော့ မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ အသငျး ရဲ့ ကှငျးလယျ ကစားသမား ဖွဈသူ စကော့ မကျ တျောမီနေး က အသငျး အတှကျ ဦးဆောငျ ဂိုး သှငျးယူ ပေးသှား နိုငျခဲ့ ပါတယျ ။ အဆိုပါ သှငျးဂိုး က သူ့ရဲ့ ကစားသမား ဘဝ အိုးလျ ထရပျဖို့ဒျ မှာ သှငျးယူ ခဲ့တဲ့ ပထမဆုံး ဂိုး ဖွဈခဲ့ ရ ပါတယျ ။
အဲ့ဒီနောကျ ပှဲခြိနျ ဒုတိယပိုငျး စတငျ သှားတဲ့ အခါ 10 မိနဈ လောကျ အကွာ မှာ မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ အသငျး ဟာ ပွိုငျဖကျ အသငျး ဂိုး ဧရိယာ ထဲ ဘောလုံး ပေးပို့ လိုကျတဲ့ အခြိနျ အာဆငျနယျ နောကျခံလူ ကိုလာဆီနကျ ဟာ လကျထိ သှားခဲ့ ပါတယျ ။
ဒါကို ယူနိုကျတကျ ကစားသမား တှကေ ကှငျးလယျဒိုငျ ဆီ စောဒက တကျခဲ့ ကွ ပမေယျ့ ကယျဗငျ ဖရနျ့ က VAR စဈဆေး မှု မပွုလုပျ ခဲ့ပဲ ပှဲကို ဆကျလကျ ကစား သှား စခေဲ့ ပါတယျ ။ အဲ့ဒီနောကျ မကွာမီ မှာပဲ အာဆငျနယျ အသငျး အတှကျ တိုကျစဈမှူး အူဘာမီယနျး က ခွပေဂိုး သှငျးယူ သှားနိုငျ ခဲ့ ပါတယျ ။
အဆိုပါ ဂိုး ကိုတော့ စညျးကွပျ ဒိုငျက လူကြှံဘော အဖွဈ သတျမှတျ ခဲ့ ပမေယျ့ ကှငျးလယျဒိုငျ ကယျဗငျ ဖရနျ့ က VAR နဲ့ စဈဆေး သှားခဲ့ ပွီး ဂိုး အဖွဈ ခှငျ့ပွု သှားခဲ့ လိုကျ ပါတယျ ။ အခုတော့ ယူနိုကျတကျ နညျးပွ ဆိုးလျရှား က ပငျနယျတီ ရရှိ သငျ့လား ဆိုတဲ့ အပျေါ VAR ကို မေးခှနျး ထုတျသှား ခဲ့လိုကျ ပါတယျ ။
” ဒါဟာ ( အူဘာမီယနျး ရဲ့ သှငျးဂိုး ) VAR ဖကျက နေ ခမြှတျ ခဲ့တဲ့ မှနျကနျတဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြ တဈခု ပါပဲ ။ ဒါပမေယျ့ ကြှနျတျော တို့ ကရော ပငျနယျတီ တဈကွိမျ မရ ရှိခဲ့ သငျ့ဘူးလား ? ” လို့ ဆိုးလျရှား က သူ့ရဲ့ မကနြေပျ ခကျြကို ထုတျဖျော ပွောကွား လိုကျပွီး ဦးဆောငျ ဂိုး ရရှိ ပွီးနောကျ ဂိုးပွနျ ပေးခဲ့ ရတဲ့ အပျေါ …
” ကြှနျတျော တို့ ပှဲစဉျ အတှငျး 1 –0ဆိုတဲ့ ရလဒျ နဲ့ ဦးဆောငျ ခဲ့ပွီး ဒုတိယ ဂိုးကို ဆကျလကျ မသှငျးယူ နိုငျခဲ့ ကွတာ ဟာ ပှဲ ဘယျလောကျ တောငျ ရှိနေ ပွီလဲ ? ဒါဟာ ကြှနျတျော တို့ သခြောပေါကျ လလေ့ာ ကွရ တော့မယျ့ အရာ တဈခု ပါပဲ ။ ကြှနျတျော တို့ အလုပျတှေ ဆကျပွီး ကွိုးစား သှားကွ မှာပါ ။ အတှေ့ အကွုံတှေ မြားပွား လာခွငျး နဲ့ အတူ ကြှနျတျော တို့ မှနျကနျ တဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြ တှကေို ခမြှတျ နိုငျမှာ ပါ ”
” ဒုတိယ ပိုငျး ပွနျလညျ စတငျ ခဲ့တဲ့ အခြိနျ မှာ ကြှနျတျော တို့ တှဟော ပွိုငျဖကျ ကို ဒုက်ခ ပေးနိုငျ လောကျတဲ့ အထိ မွနျဆနျ သှကျလကျ မှု မရှိခဲ့ ကွဘူး လို့ ထငျမိ ပါတယျ ။ ပှဲစဉျ အနအေထား အရ အာဆငျနယျ ကတောငျ ကြှနျတျော ဂိုး မရခငျ အထိ ကြှနျတျော တို့ထကျ ပိုပွီး တကျကွှ နခေဲ့ သလို ပါပဲ ”
” ကြှနျတျော တို့ တိုကျစဈ ကစားပုံ ပိုပွီး ပုံဖျော နိုငျမယျ ဆိုရငျ ဂိုး ရနိုငျ လိမျ့မယျ လို့ ကြှနျတျော ထငျခဲ့ ပါတယျ ။ ကြှနျတျောလညျး ကစားသမား ဘဝ တုနျးက ငါတို့ ဒီထကျ ပိုပွီး လုပျနိုငျ ခဲ့ သငျ့တယျ ဆိုတဲ့ အတှေး တှေးခဲ့ ဖူး ပါတယျ ။ ကြှနျတျော တို့ အခု တော့ လလေ့ာ သငျယူ မှုတှေ ဆကျလကျ လုပျဆောငျ ရပါ တော့မယျ ” လို့ ဆိုးလျရှား က အဆုံးသတျ ပွောကွား သှားခဲ့ လိုကျ ပါတယျ ။